Dhadhaab: hawlaha gargaarka ee la dhimey waxaa ay saameyn ba’an ku yeelan karaan qaxootiga - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhadhaab: hawlaha gargaarka ee la dhimey waxaa ay saameyn ba’an ku yeelan karaan qaxootiga
29.11.2011 | Qeybta Guud, Taakulada Soomaalida
Dadaab ©Tom Maruko
Nuskii labaad ee sanadka 2011ka, MSF waxaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Kenya ku qabsadey nabadgelyo-xumo sii korodhey. Afduubkii laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha MSF loo geystey bishii Oktoobar ayaa hay’adda ku khasbey in ay hakiso hawlihii ay ka waddey xerada Ifo iyo in ay si ku-meelgaar ah u yareyso adeegyadii ay ku bixin jirtey xerada Dhagaxley oo ay ku koobto oo keliya waxqabadyada nolol-badbaadinta ee cusbitaalku bixiyo.
In kasta oo ay xaaladdu sidaa ahayd, haddana shaqaalaha caafimaadka ee MSF marna ma joojin in ay daryeel caafimaad ku bixiyan xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida oo dhan, waxaana MSF ay hadda dib u bilowdey dhammaan hawlihii caafimaad ee ay ka waddey Dhagaxley.
Kooxaha MSF ayaa ka shaqeynaya sidii ay u hubin lahaayeen in daryeel caafimaad oo tayo leh ay u helaan qaxootiga. Cusbitaalka 300 sariirood leh oo ku yaalla Dhagaxley ayaa si buuxda u shaqeynaya, waxaana dib loo furey afar ka mid ah rugaha caafimaadka ee
shanta ah. In ka badan 2,100 carruur ah ayaa lagu daweynayaa barnaamijyada nafaqada, waxaana 200 la dhigey cusbitaalka si looga daweeyo dhibaatooyin caafimaad oo ay qabaan. Kooxaha ayaa 5,500 la-talin caafimaad ah toddobaad kasta ku sameynaya rugaha caafimaadka, waxaana in ka badan 400 toddobaad kasta lagu dhigaa cusbitaalka.
Sidaas oo ay tahay haddana sanad kale oo uu dagaalku socdo oo gargaarkii bani’aadamnimaduna ee Soomaaliyana yaraadey uu macnaheedu yahay in boqollaal kun qof ay gudaha ku barokaceen, iyo in kuwo badan ay galeen dalalka deriska la ah si ay ammaan ugu
helaan. Baahiyaha caafimaad ee dadka ayaa horeyba u ahaa kuwo aad u weyn ka hor intii aaney bilaaban xaaladda degdegga ah ee nafaqada ee hadda saameysey geeska Afrika. Waa xaaladdan tan ay MSF la rafaneyso in ay daryeel ku dhex bixiso.
Kooxaha caafimaadka ee MSF waxaa ay si gaar ah ugu welwelsan yihiin qaxootiga. “Hadda, ku dhowaad dhammaan hay’adihii
gargaarka waxa ay hoos u dhigeen hawlahoodii. Waxaan ka baqeynaa in aan dib ugu noqonno sidii ay xaaladdu ahayd xagaagii la soo dhaafey, markaas oo xaaladda caafimaad ee qaxootiga xerooyinka ku jira ay dhab ahaantii sii xumaaneysey. Xaaladda dadka ayaa ugu dambeyntii soo wanaagsanaaneysey markii shilkaa nabadgelyo uu dhacayey. Hawlaha hadda la yareeyey waxaa ay saameyn weyn ku yeelan karaan qaxootiga. Tusaale ahaan, maanta, kuwa ka soo gudbi kara xuduudda ee soo magangeli kara Dhadhaab ma heli karaan hoy, cunto iyo agabka aan cuntada ahayn” ayaa uu yiri Dr. Jean-Clément Cabrol, oo ah Agaasimaha Hawgallada MSF.
Xaaladda ayaa weli ah mid aad u nugul. Bilihii u dambeeyey, kooxaha MSF waxaa ay ku khasbanaadeen in ay wax ka qabtaan jadeeco dillaacdey oo saameysey guud ahaan xerooyinka qaxootiga. In ka badan 380 xaaladood ayaa lagu daweeyey xarumaha caafimaadka MSF tan iyo bishii Agoosto, waxaana la tallaaley ku dhowaad 113,800 qof . shuban-biyood ayaa hadda halis caafimaad oo weyn dadka ku haya waxaana xaalado daacuun oo la xaqiijiyey lagu arkey dhammaan saddexda xero. MSF waxaa ay xarun daaweynta daacuunka ah oo leh 50 sariirood ku leedahay Dhagaxleey, waxaana tobankii maalmood ee la soo dhaafey xaruntaas la dhigey 45 bukaan.
Laakiin caafimaadka oo keliya ma aha welwelka ay qabaan kooxaha MSF ee wax ka qabanaya dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ku haysta Kenya iyo Soomaaliya. Faragelinta ciidamada Kenya ee koonfurta Soomaaliya, iskahorimaadka Soomaaliya ku dhex maraya ciidamada TFG iyo maliishiyaadka Al-Shabaab ee iska soo horjeeda, iyo gaaris la’aanta degaanno ballaaran oo Soomaaliya ka mid ah, ayaa dadka Soomaaliyeed gelinaya xaalad adag. Iyada oo lagu xisaabtamayo xaaladda hadda jirta, ayaa MSF ay ka welwelsan tahay awoodda
ay leedahay in ay gaarto dadka Soomaaliyeed iyo in ay fuliso gargaar ay u madax-bannaan tahay.
President Sharif Sheikh Ahmed said, he welcomes the IGAD decision from the recent ordinary summit held in Addis Ababa-Ethiopia to destroy Islamist militants of Al-shabab and root out from their strong hold regions in Somalia with the help of African union peace keeping troops inMogadishu.
Somali presidents also cited that the parliament lawmakers went unpaid because of the financial problems of the Government. Mr.Ahmed pointed out the there are mismanagement of international donors intended TFG, urging the international community to deliver soon their economic help toSomalia government.